‘कच्चा पिल्लर’ मा नयाँ शक्ति - Ratopati
‘कच्चा पिल्लर’ मा नयाँ शक्ति
- | सागर राई
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले लामो समय वितिसकेको छ । आर्थिक उन्नति नहुँदा सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरु विग्रने स्थिति बढ्दै गएको छ । हिजोका दिनमा परिवर्तनका लागि ध्वंशात्मक राजनीतिक गर्दै आएका नेपालका राजनीतिक दलहरु अब विकासवादी दल बन्नेतर्फ अघिबढिरहेका छन् । यो सुखद् पक्ष हो । तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टी परित्याग गर्दै नयाँ शक्ति नेपाल नामक पार्टी गठन गरेका डा. बाबुराम भट्टराईका नयाँ शक्ति र विद्यार्थी युनियनका विषयमा चिरफार गरौं ।
विशेषगरी अबको विकास आर्थिक विकास भन्ने मूल नाराले नेपाली जनताको चासो बढ्दै गएको छ । विशेषगरी नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिपादन गरेको ५ ‘स’ले नेपाली समाजको आकर्षण अलिकति तानेको पनि हो । विभिन्न पेशाकर्मी, कर्मचारी, विज्ञ, कलाकार र ससाना विचारहरु प्रत्यक्ष रुपमा नयाँ शक्ति पार्टीको हिस्सा बन्दै आइरहेको छ । त्यसो त डा. बाबुरामले सञ्चालन गरेका विभिन्न अन्तत्र्रिmयाहरुमा नयाँ शक्ति नेपाल एउटा घर हो, उक्त घर निर्माण हुने क्रम जारी छ भन्दै आएका छन् । एउटा घर बन्नको निम्ति इँटा, बालुवा, पानी, ढुङ्गा, सिमेन्ट, रड आदि कुराहरु आवश्यक पर्दछन् । त्यसैले नयाँ शक्ति नेपालमा इँटा, ढुङ्गा, बालुवा, सिमेन्ट, रड आदिको थुप्रोजस्तो देखिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई आफू स्वयं आर्किटेक्चर भएको कुरा उनले हरेक अन्तत्र्रिmयाहरुमा बताउने गर्दछन् । त्यसैले उनले बनाउँदै गरेको घर कस्तो हुन्छ भन्ने जनचासो रहनु स्वभाविक हो ।
सशस्त्र माओवादी युद्धकालदेखि नै बाबुराम भट्टराईको नाम स्थापित भएको हो । शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि उनले अर्थमन्त्री हुँदा नेपालको बजेटको आकार बढाउनु, प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौंको बाटो फराकिलो बनाउनु र उपाध्यक्ष पद त्यागेर आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ शक्ति नामको पार्टी गठन गरेका कारणले गर्दा उनलाई जनताले केही आशा र भरोसा गरेका छन् ।
विभिन्न दलका नेताहरु आर्थिक विकासमा असक्षम देखिँदै गएपछि बाबुरामको विकल्प छैन भन्नेहरुको पनि कमी छैन । तर उनले भनेजस्तै घर निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुको थुप्रो टुक्रिने, फुट्ने खिया पर्न थालेको विश्लेषण गर्नेहरुको पनि कमी छैन । विभिन्न घटनाहरुमा संलग्न आरोपितलाई संरक्षण गर्ने वैकल्पिक सङ्गठनजस्तो पनि भएको देखिन्छ । नातावाद, परिवारवाद अनि अराजक, आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
लामो समयदेखि नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन वैकल्पिक विद्यार्थी सङ्गठन बनाउने भन्ने बहसहरु चलिरहँदा म स्वयं पनि वैकल्पिक विद्यार्थी सङ्गठनको अपेक्षा राख्दै संलग्नता रहेको सत्य हो । नेपालमा ने.वि. सङ्घ हुँदै विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन विभिन्न कालखण्डमा विद्यार्थीका हकहितका लागि निर्माण भएको सत्य हो । हिजो मुलुक विभिन्न समस्यामा गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरुले मुलुक परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हो तर हिजाको विद्यार्थी आन्दोलन ध्वंशात्मक थियो । अब मुलुक विकासको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने आम विद्यार्थीहरुको चाहना हो । आजको शिक्षा प्रणाली सीपयुक्त हुनुपर्छ ताकि पढेर आफ्नै मुलुकका रोजगारी प्राप्त गर्न सकून् भन्ने आम विद्यार्थीको साझा धारण हो । त्यसैले सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरु रुपान्तरित हुन जरुरी छ । यो विषयमा विद्यार्थी सङ्गठन उदाशीन छन् । किनभने परम्परा दोहोरिने क्रममा छ । नक्कली विद्यार्थीहरु विद्यार्थीका नेता बन्न ४०, ५५ वर्ष पुगे पनि लागिपरिरहेका छन् । विद्यार्थीका यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न वैकल्पिक विद्यार्थी सङ्गठन बन्नुपर्छ भन्ने बहस चलेको हो । यसर्थ नयाँ शक्ति विद्यार्थीको नक्सा न बाबुराम भट्टराईले कोरेको जस्तो बन्यो न त वैकल्पिक विद्यार्थी जस्तो मुख्य गरी डा. बाबुरामले भने जस्तै घर बन्न चाहिने बालुवा, इटा, ढुङ्गा, सिमेन्ट रड आदि सामग्रीहरु आवश्यक पर्ने भनिए पनि यहाँ लगभग पूर्व माओवादी क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनबाट आएका व्यक्तिहरु मात्र संलग्न देखिन्छन् । त्यसैले यसको आकृति हेर्दा लगभग बालुवाको घरभन्दा फरक देखिँदैनन् ।
डा. बाबुरामले बुद्ध र चेलाका कहानी सुनाएर विद्यार्थीहरुलाई तयारी पुगेन, यो नयाँ शक्ति पार्टीका आकृति अनुसार भएन भनेर नयाँ ढङ्गबाट सुरुवात गराएका छन् । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन पार्टीले सकेन । पुराना सोच भएका मानिसहरुको सङ्गठनले न आम विद्यार्थीहरुको मन जित्न सक्ने छ न त माउपार्टीलाई नै फाइदा गराउँदछ । त्यसैले नयाँ शक्ति एउटा घर हो अन्य आङ्गिक सङ्गठनहरुलाई घरको पिल्लर ठान्ने हो भने पिल्लर कच्चा बनेको हो । घर मजबुद बनाउने हो भने आर्किटेक्चरले कच्चा पुरानो घर बनाएर नेपाली जनतामा अर्को भार नथपून् । विज्ञ भएर दिसापिसाबबाट अन्न फलाउन सक्नेहरुले आफ्नो सङ्गठनको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । त्यसले विद्यार्थीलाई आजकै कर्णधार बनाउन रकून् । त्यसैले आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाएर देशलाई निकास र विकास दिने सङ्गठन बनाउन सफल रहून ।